Fehin’ny Tontolon’ny Bilaogy ao Koety · Global Voices teny Malagasy
Fehin'ny Tontolon'ny Bilaogy ao Koety
Voadika ny 03 Novambra 2018 10:11 GMT
Mifangaro be ny fomba fitaizana ao Koety. Miresaka i Q fa vitan'ireo ray aman-dreny tsotra izao ny mamela ny zanany miaraka amin'ireo mpanampy rehefa mbola kely ireto farany, ary manahy izay mety ho fiantraikan'izany amin'ny fitomboan'ny ankizikely izy. Manamarika kosa i Sheba fa akaikin'ny zanany foana ny reny rehefa any am-pianarana izy ireny ary miahy azy ireo sy manampy/manao ny entimodiny ary mankany amin'ny fitarihan-dàlan'ny anjerimanontolo mihitsy aza mba hanampy amin'ny fametrahana azy ireo.
Mampiasa tabilao sy antontanisa hanamarinany ny antony mbola tsy hanambadiany hatramin'izao (rohy maty) i Misguided .
Mazana sy mifangaro be hatrany ny asa ao Koety. Mampitaha sy manavaka ny asam-panjakana amin'ny sehatra tsy miankina i Jazz Central. Manoratra momba ny harerahana anatin'ny sehatra tsy miankina izay manosika ny olona hiala an-daharana (rohy maty) i Confused. Mety hitombona izany araka ny asehon'i Forza miaraka amin'ny famelan'ny Google ireo mpiasany hamorona hevitra vaovao sy fitaovana vaovao toy ny Googles Secure Access; raha tsy mampiasa vola afa-tsy amin'ny tsenambola sy ny fivarotana tany sy trano kosa i Koety, fa tsy amin'ny hevitra sy olona.
Manantena i Kuwait Tranny fa any indray andro any mba hiaraka ho any an-tsekoly ny reny sy ny zanaka (rohy maty), ary hifandray amin-kitsim-po ny ray aman-reny sy ny zanany, saingy manahy ny tsy hisian'izany mihitsy ao Koety izy.
Manontany ny toerana tsara indrindra hisakafoanana ao Koety i Entrepreneur, raha mitanisa ireo fanamarihana vitsivitsy momba an'i Koety kosa i Latifa.
Mizara amintsika ireo sarin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao Koety sy ny ranomasiny lalina i Don veto, raha manontany tena ny isan'ireo mpankafy sudoku ao Koety (pejy fotsy) kosa i Toomz.